Yesaia 14 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Israelfo bɛtena wɔn ankasa asaase so (1, 2)
Wɔbɔ Babilon hene akutia (3-23)
Nea ɔhyerɛn no befi soro abɛhwe fam (12)
Yehowa nsa bebubu Asiriani no (24-27)
Filistia ho atemmusɛm (28-32)
14 Na Yehowa behu Yakob mmɔbɔ,+ na ɔbɛsan apaw Israel.+ Ɔde wɔn bɛtena* wɔn asaase so,+ na ahɔho de wɔn ho bɛbɔ wɔn na wɔde wɔn ho afam Yakob fi ho.+ 2 Na nkurɔfo bɛfa wɔn na wɔde wɔn aba wɔn asaase so, na Israel fi de wɔn bɛyɛ agyapade na wɔayɛ nkoa ne mfenaa+ wɔ Yehowa asaase so. Na wɔn a wɔkyeree wɔn kɔe no, wɔn nso bɛkyere wɔn bi, na wɔn a wɔhyɛɛ wɔn ma wɔyɛɛ adwuma no bɛba abɛhyɛ wɔn ase. 3 Ɛda a Yehowa bɛma woahome afi wo yaw ne w’abɛbrɛsɛ ne wo nkoasom mu brɛ mu no,+ 4 wubebu Babilon hene bɛ* sɛ: “Ei! Nea ɔhyɛ nkurɔfo ma wɔyɛ adwuma no na n’awiei aba yi! Nhyɛso na ɛto atwa yi!+ 5 Yehowa abubu abɔnefo abaa,Ne atumfo poma,+ 6 Nea ɔde abufuhyew bobɔ aman a onnyae,+Nea ɔtan amanaman ani a onnyae, na ɔde abufuw hyɛ wɔn so no.+ 7 Asaase nyinaa so adwo; ɔhaw biara nni so. Nkurɔfo de anigye bɔ ose.+ 8 Nea ato wo no ama ɔpopaw nnuaNe Lebanon sida nnua mpo ani agye. Wɔka sɛ, ‘Efi bere a wohwee ase yi,Obi a obu nnua biara mmaa yɛn so.’ 9 Ɔdamoa* a ɛwɔ asaase ase mpo de ahopereRebehyia wo ama wo akwaaba. Wo nti, wanyan awufo a wontumi nyɛ hwee no,Asaase so atumfo a wɔn tirim yɛ den* nyinaa. Wama amanaman no ahemfo nyinaa asɔre afi wɔn nhengua so. 10 Wɔn nyinaa ka kyerɛ wo sɛ,‘Wo nso woadwudwo te sɛ yɛn anaa? Woayɛ sɛ yɛn anaa? 11 W’ahomaso asian abedu Ɔdamoa* mu,W’asanku nnyigyei no.+ Mmoawa manyamanya abɛyɛ mpa a woda so,Na asunson abɛyɛ ntama a ɛkata wo ho.’ 12 Hwɛ sɛnea wufi soro abɛhwe fam,O wo a wohyerɛn, adekyee ba! Hwɛ sɛnea wɔatwa wo abɛhwe asaase so,Wo a wobrɛɛ aman ase!+ 13 Wokae wɔ wo komam sɛ: ‘Mɛforo akɔ soro.+ Mɛma m’ahengua so asi Onyankopɔn nsoromma atifi,+Na mɛtena nhyiam bepɔw no so,Wɔ atifi fam akyirikyiri.+ 14 Mɛforo atra ɔsoro mununkum;Mɛyɛ me ho sɛ Ɔsorosoroni no.’ 15 Nanso wɔbɛtew wo abɛhwe Ɔdamoa* mu,Amoa ase tɔnn. 16 Wɔn a wobehu wo no bɛhwɛ wo hãã;Wobegyen wɔn ani ahwɛ wo aka sɛ:‘Ɛnyɛ ɔbarima a na ɔma asaase wosow,Na ɔmaa ahenni ahorow hinhimii no ni?+ 17 Ɛnyɛ ɔno na ɔmaa asaase dan sare,Na ɔkaa so nkurow butuwii,+Na wamma ne nneduafo kwan ankɔ wɔn fi no?’+ 18 Amanaman ahemfo nyinaa,Wɔn nyinaa deda hɔ anuonyam mu,Obiara da ne damoa mu.* 19 Nanso wo de, woannya ɔdamoa biara. Wɔatow wo akyeneTe sɛ dua foforo* a wɔapo,Te sɛ obi a mmarima a wɔatotɔ sekan ano akata ne ho baabiara,Te sɛ mmarima a wɔasian kɔ amoa a abo wom mu,Te sɛ efunu a wɔatiatia so. 20 Worenkɔka wɔn ho wɔ ɔdamoa mu,Efisɛ woasɛe wo ara w’asaase,Woakunkum w’ankasa wo nnipa. Wɔremmɔ abɔnefo asefo din bio da. 21 Munsiesie baabi a mubekum ne mma,Wɔn agyanom bɔne nti,Na wɔansɔre amfa asaase no,Na wɔankyekye nkurow anhyɛ so ma.” 22 “Mɛsɔre aba wɔn so,”+ asafo Yehowa na waka. “Edin oo, nkaefo oo, mma oo, mmanana oo, mɛpopa ne nyinaa afi Babilon,”+ Yehowa na waka. 23 “Mede no bɛma akɔtɔkɔ, na ɛhɔ bɛdan asaase a nsu taa so,* na mede ɔsɛe prae bɛpra no akɔ,”+ asafo Yehowa na waka. 24 Asafo Yehowa aka ntam sɛ: “Nea masusuw no, ɛno ara na ɛbɛba mu,Na gyinae a masi no, ɛno ara na ɛbɛyɛ hɔ. 25 Mebubu Asiriani no wɔ m’asaase so,Na matiatia no so wɔ me mmepɔw so.+ Wobeyi ne kɔndua afi wɔn so,Na wɔayi ne nnesoa afi wɔn mmati so.”+ 26 Eyi ne pɔw a wɔabɔ* atia asaase nyinaa,Na eyi ne nsa a wɔateɛ wɔ aman nyinaa so.* 27 Asafo Yehowa asi gyinae,Hena na obetumi asiw no kwan?+ Wateɛ ne nsa,Hena na obetumi akoa mu?+ 28 Afe a Ɔhene Ahas wui no,+ wɔde asɛm yi too gua: 29 “Filistia, mo mu biara nnni ahurusi,Esiane sɛ abaa a mo tamfo de hwee mo no mu abu nti. Hwɛ, ahurutoa*+ befi ɔwɔ ntini+ mu aba,Na n’aseni bɛyɛ ɔwɔ a ɔtow ne ho a n’ano yɛ ogya.* 30 Mmɔborɔwafo mmakan bedidi,Na ahiafo ada ma wɔn asom adwo wɔn.Nanso wo de, mede ɔkɔm bekum wo ntini,Na wɔn a wɔbɛka wɔ wo mu no nso, wobekunkum wɔn.+ 31 O ɔponkɛse, su teɛteɛm! Kurokɛse, teɛm! O Filistia, mo nyinaa koma betu! Efisɛ wusiw bi fi atifi reba,Na n’asraafo no mu biara nni hɔ a ɔbɛka akyi.” 32 Asɛm bɛn na wɔde bebua nkurɔfo a ɔman no asoma wɔn* no? Wobebua wɔn sɛ, Yehowa ato Sion fapem,+Na ne man mu mmɔborɔwafo bɛhwehwɛ guankɔbea wɔ ne mu.
^ Anaa “Ɔbɛma wɔahome wɔ.”
^ Anaa “wobɛbɔ Babilon hene akutia.”
^ Nt., “mpapo no.”
^ Anaa “dubaa.”
^ Nt., “agyina a wɔatu.”
^ Anaa “eyi ne nsa a ayɛ krado sɛ ɛbɛbɔ aman nyinaa.”
^ Anaa “abɔfo a ɔman no atu wɔn.”